ကျမတို့အ်ိမ်ထောင်ကျခါစတုန်းကကျမတို့ဇာတိအညာမြို့လေးမှာနေပါတယ်။အဲဒီမြို့လေးမှာအစားအသောက် တွေ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအရမ်းပေါပါတယ်။ဆွေမျိုးမိသားစုတွေလည်းရှိနေတယ်လေ။ ကျမကအဲဒီမြို့လေး မှာမွေးပေမဲ့၊တခြားတနေရာမှာကြီးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းအဖွားတွေအဒေါ်တွေရှိ တဲ့အဲဒီမြို့လေး ကိုပြန်ရောက်ဖြစ်တယ်။ကျမအိမ်ထောင်ပြုတဲ့အချိန်မှာဘာဟင်းမှမချက်တတ်သေးပါဘူး။
ပါတယ်။နောက်တော့ဈေးတယောက်ထဲ မသွားရဲတဲ့ကျမ တယောက်ထဲလည်းသွားရဲပြီးဈေးဝယ်ရတာပျော်
လာပါတယ်။ချက်ရေးပြုတ်ရေးလည်းအတော် ကျွမ်းကျင်လာပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရောက်တော့လည်း supermarket တွေမှာဝယ်ရတာထက်၊wetmarket တွေမှာဝယ်ရတာကိုပိုပြီးကြိုက်ပါတယ်။လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေပိုပြီးရတတ်တယ်။ဒီနိုင်ငံမှာချဉ်ပေါင်သီးတွေရောင်းပေမဲ့ချဉ်ပေါင်ရွက်ကိုဝယ်မရပါဘူး။သူတို့လူမျိုးက
တနေ့ကလည်းကျမတို့ခြံဝင်းထဲက ဒန့်သလွန်ပင်မှာအမျိုးသားနဲ့ကျမဒန့်သလွန်သီးတွေခူးနေတုန်း လူမဲ တယောက်ကအဲဒါဘာလုပ်ဖို့လဲ၊ကစားဖို့လားတဲ့မေးပုံက။မဟုတ်ဘူးဟင်းချက်စားဖို့ဆိုတော့မစားနဲ့တဲ့
အဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။မဖြစ်ပါဘူးငါတို့စားနေကြလို့ပြောတာ့ It is funny ဆိုပြီးရီပါလေရော။
စနေနေ့ကပုဇွန်စားချင်လို့ဈေးသွားတော့ပုဇွန်မရခဲ့ပါဘူး။ပုဇွန်သည်က Wednesday လာပို့မယ်ပြောပါတယ်။ မနေ့ကညနေကလာပို့သွားပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဈေးဝယ်ခြင်းအကြောင်းရေးနေတဲ့ငွေစန္ဒာဟင်းချက်ခြင်းအ
ထားပါ။ကြက်သွန်နီ ၁ ဥ၊အဖြူ ၃မွှာလောက်ကိုကြိတ်ပြီးအိုးတလုံးထဲမှာထည့်ဆီဟင်းခတ်ဇွန်း၁ဇွန်း၊ဆား
ကြိတ်ညက်ရင်ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးထားတာနဲ့ဆီစိမ်းထည့်ပြီး နယ်လိုက်ရင် သရက်သီးထောင်းချဉ်စပ်လေး
Posted by ငွေစန္ဒာ at 3:23 PM
Baby taster March 31, 2011 at 3:40 PM
အားမနာတော့ဖူးနော့း) ဒီနေ့ အိမ်မှာ
ကြောင်ရှာသီး ကြော်မလို့ စားမလား :)
ဒါနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဘယ်လိုမှာ ရလည်းတော့ မသိဘူးရယ်
တခါမှမမှာဖူးဘူး ကိုယ့်ကိုတော့ မာမီနဲ့ မေမေပဲ ပို့ပေးနေကျဆိုတော့လေ
မင်းသီလတို့ ဘာတို့မှာ မေးကြည့်ပါလား။ မရနိုင်တာဆိုပြောလေ
ပို့ပေးမယ် စာရင်းသာလုပ်ပြီးပေးလိုက် :)
Sunny March 31, 2011 at 4:40 PM
ဟိုက်.. မမဘေဘီ အကုန် သယ်သွားပြီဆိုတော့ ကျန်ပါ့ဦးမလား.. ပုစွန်ဟင်းတွေ စားချင်တယ်ဗျို့ .. ပုစွန်ဈေး (ပုစွန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်) သွားရမှာပျင်းတာနဲ့ မချက်ဖြစ်တာ.. အခုတော့ ဒီမှာတွေ့တာ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်.. စား (ငေး) သွားတယ်.. :)
ငွေစန္ဒာ March 31, 2011 at 4:41 PM
ငွေစန္ဒာ March 31, 2011 at 4:45 PM
ဆန်းနီရေ ပုဇွန်တွေအများကြီးပဲ ယူသွားလို့ရပါတယ်။
Evy March 31, 2011 at 9:55 PM
ဈေးဝယ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေလာဖတ်သွားတယ် အစ်မရေ။ အိမ်မှာလဲပုဇွန်ချက်ရင် မြန်မြန်ချက်ရတယ်။ မာသွားမှာစိုးလို့လေ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) April 1, 2011 at 1:48 AM
ပုဇွန်က ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ ရောလိုက်တော့ ခါးမသွားဘူးလား
သရက်သီးလေးနဲ့ဆို ထမင်းက သိပ်စားကောင်းမှာဘဲ.
ခုတော့လည်း အိမ်ရှင်မ ကောင်းကောင်းကြီး ဖြစ်သွာံးပြီမဟုတ်လားနော်
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! April 1, 2011 at 3:00 AM
ဝါးးးးးး စားချင်လယ်...နည်းနည်းလောက် ကျွေးပါလားမမ..အဟီး
Mon Petit Avatar April 1, 2011 at 7:05 AM
Iora April 1, 2011 at 8:52 PM
ပိန်းဥတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အမေကအရမ်းကြိုက်လို့ အမေ့ကို တော့ခဏခဏချက်ကျွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အမေ့ကိုတောင်သတိရသွားပြိ။
အဲဒီလို ပုဇွန်တွေစားဘို့ အသာထား တွေ့ တောင်တွေ့ ရတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာက ခပ်ဖြူဖြူတွေဘဲ။ အားပေးသွားပြီ။
rose April 2, 2011 at 2:47 PM
အစ်မငွေစန္ဒာ အိမ်ထောင်ကျခါကစ ဈေးသည် ကိုတောင် လှမ်း အော် မခေါ်ရဲတာ တော်တော် ရှက်တတ်တာပဲနော်။ အခုတော့လည်း အစ်မ ခင်ပွန်းအတွက်၊ သမီးလေး အတွက်နဲ့ ဈေးဝယ်လည်း ကျွမ်း၊ အချက်အပြုတ်လည်း တော်နေရောပေါ့။ အဲ့ဒီလို ပုဇွန်ထုတ်ကြီးတွေ စားချင်လိုက်တာ။ ဒီမှာ အဲ့လို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ၀ယ်မရဘူး။ ပြီးတော့ ရို့စ်က ပုဇွန်ဆို ခေါင်းကို သိပ်ကြိုက်တာ။ ခေါင်းတွေ ဖြုတ်ပြီးသားတွေ ရောင်းတယ်။ စိတ်ကုန်တယ်း(
ကိုဇော် April 2, 2011 at 5:26 PM
ပုစွန်ထုပ်ကြီး ကြည့်ပြီး သွားရည်ထုပ်ကြီး ကျတယ်ဗျာ။
သရက်သီး ချဉ်စပ်ကိုလည်း ကြည့်ရော တောက်တောက်ကို ယိုတော့တာပဲ။
လမ်းမှာ တွေ့ရင် ဟင်းတစ်ခွက်လောက် လိုက်တောင်းဦးမယ်။
ငွေစန္ဒာ April 3, 2011 at 6:44 PM
ပုဇွန် ကြိုက် ပိန်းဥ မကြိုက် ကြက်ဟင်းခါး ကြိုက်
ငွေစန္ဒာ April 4, 2011 at 5:23 PM